Excerpts fromanew book of Atta Kyaw – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on7August 2009 14 October 2015 Categories Excerpts
3 thoughts on “Excerpts fromanew book of Atta Kyaw”
7 August 2009 at 3:38 pm
I’m totally agree with Saya Atta Kyaw.
In this article, I assume the Burmese word “Tha Baw Htar” refers to “attitude”.
8 August 2009 at 1:10 am
The assumption is correct. Behaviour and attitude goes hand in hand. Knowledge comes first to haveacertain attitude changed. And when the attitude is shifted, there comesanew behaviour.
26 August 2009 at 8:18 pm
သူလည်းအဆင်ပြေ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေတဲ့ လူရည်လည်နည်းကို သိလိုက်ရတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို လူမုန်းများမှာစိုးလို့ ယုန်ကလေး နှာစေးနေလိုက်ရတာ များတယ်။ ခုတော့ ယုန်ကလေး နှာမစေးပဲ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေသိလိုက်တယ်။ အဲဒါ တစ်ခု။
သေချာအချိန်ယူပြီး မဖတ်နိုင်သေးလို့ ဝေဖန်ချက်အသေးစိတ်မရေးနိုင်သေးဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ဆရာ့ရဲ့ အာဘော် အမြင် အယူတွေကို ပိုကြိုက်မိတယ်။ ဆရာ့ရဲ့အမြင် အဖြစ်အပျက်ကနေ ကောက်ချက်ဆွဲတာတွေ ပိုကြိုက်မိတယ်။ ဆရာကပွင့်လင်းတဲ့သူဆိုတော့ ပွင့်လင်းတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်စရိုက်နဲ့ ဆရာ့စာတွေက ကိုက်ညီလို့ တော်တော်ကြိုက်မိတယ်။
ခုတော့ဒါပဲပြောတတ်သေးတယ်။ ဒီစာအုပ်နဲ့ဆိုင်တာလည်း သိပ်မပြောနိုင်သေးဘူး။
ပြောနိုင်တာက စာအုပ်အပြင်အဆင်လေးကောင်းတယ်။ ဈေးလေးကလည်း ကြီးသလိုပဲ။ ဘာလို့လည်းမသိဘူး။ စာအုပ်ဖုံးအသားကြောင့်ဖြစ်မယ်။ အထဲကစာတွေကတော့ ဖတ်တဲ့သူအတွက် အကျိူးများပါတယ်။
Previous Previous post: Excerpts from Stories from Khin Hnin Yu’s Heart